Needs Archives — njem Lee - Official Site
Needs Needs Needs Needs Needs Needs Needs Needs Needs Needs Needs Needs Needs Needs
Lee bụ audio si a na-adịbeghị anya okwuchukwu m kwusara ozi ọma on Psalm 142. Anyị niile na-aga site n'oge ihe isi ike, ma psalm-egosi anyị na ọbụna n'oge ihe kasị ụfọdụ anyị nwere ike ịhụ ihe nile anyị mkpa Chineke. The anọ ihe na-:
m. Chineke bụ enyi anyị n'oge nsogbu
II. Chineke ga-echebe anyị n'oge nsogbu
III. Chineke bụ Anyị Treasure na Times nke Nsogbu
IV. Chineke bụ Onye Mgbapụta anyị na n'oge nsogbu
All Anyị Mkpa bụ na Chineke
Dị ka ụfọdụ n'ime unu mara, Na na na a ọhụrụ nna. My nwa, Q, bụ ọnwa ise. Ọ fọrọ nke nta ụtọ mgbe nile, ma e wezụga n'ihi ke inịm enye ya akpati ụra. Ọ ozugbo tụfuru uche. Ọ kpọrọ eche na anyị na ya n'aka ilekọta onwe-ya imegide ihe isi ike gburugburu ya, dị ka ike ọgwụgwụ na-akpa ya metụ akwa gbanwere.
Ma otu ụbọchị ọ chọpụtara ọṅụ nke aṅụ na aka ya. Ọ bụ a onwe-obi ihe o achọpụtabeghị. Na mgbe ọ ekesịn ubọk ke inua - na ọ n'ezie shoves ya na e - ọ na-echefu banyere ya nile nsogbu. Ọ na-adịghị n'ezie ịgbanwe eziokwu na anyị hapụrụ nanị ya n'ime ụlọ ya,, ma aka na-eme ka ya ichefu banyere ya.
Ọfọn, Ama m na onye obula ebe a taa nwere ibu nsogbu karịa ehi ụra naanị na a ime ụlọ. Anyị nwere ego mbipụta, alụmdi na nwunye mbipụta, ahụ ike okwu, were gabazie. Na yiri nwa m, anyị mgbe ụfọdụ ịchọ ụzọ isi na-anagide nsogbu ndị anyị. Anyị achọghị ka na-eche na ihe mgbu na ahụhụ. Ya mere, anyị na-atụgharị ihe ndị na-eme ka anyị chefuo banyere ya. Ma bụ na ụzọ kasị mma obibi ya? ndọpụ uche?